"Waa in naloo sheego sharcigii loo maray xarigga wasiirka amniga ee Jubbaland" - BBC News Somali
1 Sebtembar 2019
Image caption Xarigga wasiirka amniga Jubbaland ayaa kusoo aaday xilli uu xoogeystay khlaafka labada dhinac
Maamulka Jubbaland ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aankii ay dowladda Federaalka Soomaaliya xabsiga ugu taxaabtay wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur(Cabdirashiid Janan).
Balse tallaabadaas waxaa si weyn u cambaareeyay mas'uuliyiinta maamulka uu fadhigiisa yahay magaalada Kismaayo, waxayna dalbadeen in si deg deg ah loo sii daayo Cabdirashiid.
"Shir ay guddiga amniga ee dowlad goboleedka ka yeesheen xarigga wasiirkii amniga ayuu kasoo baxay war-saxaafadeedka, waxaana dooneynaa inaan ogaanno xaaladda uu ku sugan yahay wasiirka, meesha lagu hayo iyo sababta loo qabtay intaba", ayuu yiri Injireen Cabdi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in dalabka warsaxaafadeedkooda uu ku aaddan yahay cid walba oo ku lug leh xarigga Cabdirashiid Janan, wuxuuna yiri: "Waa inaan fahanno sharciyadda loo maray xiritaankiisa, war saxaafadeedkeennana wuxuu ku socdaa ciddii ka dambeysay qabashadiisa, dowladda federaalka iyo garsoorka. Waan damacnay inaan la hadalno dowladda laakiin way diideen inay ka hadlaan arrintaas, wasiirkana meel lagala xiriiri karo ma jirto".
Hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya ayaa shirkadaha diyaaradaha ku wargelisay in dhamaan duulimaadyada caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ee kusii jeedaa Magaalada Kismayo ay soo maraan Muqdisho.
Kala qeybsanaan ka muuqata sida looga faceliyay doorashada Jubbaland
Ma cadda in go'aankan uu saameynayo dhammaan diyaaradaha caalamiga ah ee toos u taga magaalooyiinka kale ee Soomaaliya sida garoowe oo Diyaaradda Itoobiya ay tagto.